Galmudug oo Amartay in loo gurmado dadkii ka barakacay Guriceel - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Galmudug oo Amartay in loo gurmado dadkii ka barakacay Guriceel
Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid, ayaa furay Shirka agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha iyo hay’adaha madaxa bannaan ee Galmudug oo maanta ka qabsoomay magaalada Dhuusamareeb.
Shirkan oo aay soo qaban qaabisay Wasaarada arimaha gudaha Galmudug waxaa looga hadlay xoojinta wada shaqeynta,dardargelinta adeegyada bulshada, soo bandhigidda caqabadaha & fursadaha shaqo ee jira iyo hirgalinta qorsheyaasha horumarineed ee Dowlada Galmudug.
Madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa ku amray wasaaradaha Galmudug in aay gargaar la gaaran Dadka ku barakacay Guriceel ayago kashanaya Gudiga heer Wasiir ah oo uu magacaabay madaxweynaha Galmudug.
Sido nKale Madaxweyne kuxigenka Galmudug waxa uu faray Dagmoyinka Galmudug in ay ka so qayb qataan Gurmadka loo fidinayo Guriceel.
Previous articleSAWIRO:- Dowladda Soomaaliya oo gurmad u dirtay Guriceel
Next articleGuddiga doorashada Heer Federaal oo booqday Goob loo asteeyay doorashada Golaha Shacabka